Konke odinga ukukwazi mayelana ne-CNC Machining
Ngaphambi kokwethulwa kokulawulwa kwamanani ngekhompyutha (i-CNC), inqubo yokukhiqiza yayihilela umsebenzi onzima wabantu, isikhathi eside sokukhiqiza, ukumoshwa kwempahla, futhi kwakugcwele iphutha. Namuhla, ubuchwepheshe buyithuthukise kakhulu inqubo yokukhiqiza.
Ukwethulwa kobuchwepheshe be-CNC machining kunikela ngezinga eliphakeme lokuthembeka, okwenza izinqubo zokuphindaphinda zizenzakalele. Kepha, yini imishini ye-CNC? Yimiphi imikhiqizo engenziwa ngobuchwepheshe be-CNC? Ngabe i-CNC machining isebenza kanjani, nokuthi iziphi izinto ezingasetshenziswa ezinhlelweni zokukhiqiza ezisebenzisayoImishini ye-CNC?
Lo mbhalo ucwilisa ngokujulile kulokho okushiwo yi-CNC machining, kanye nemiqondo eyisisekelo ethintekayo kule nqubo. Sizoxoxa ngezinzuzo ze-CNC yokukhiqiza ngaphezu kokukhiqizwa kwendabuko, neminikelo ye-CNC ekukhiqizeni kwanamuhla.
Sizobheka nesoftware ye-CNC. Okokugcina, siqokomisa okudingekayo kubantu abafuna ukuqeqesha ukuze babe ngabasebenza ngemishini be-CNC, futhi sixoxe ngamathrendi esikhathi esizayo emhlabeni we-CNC machining.
Isifinyezo i-CNC imeleUkulawulwa Kwezinombolo Zekhompyutha. Imishini ye-CNC iyinqubo yokukhipha ebandakanya ukudala imiklamo eyenziwe ngokwezifiso kusuka ku-workpiece ngokusebenzisa izilawuli zekhompyutha. Inqubo iyakhipha ngoba umkhiqizo wenziwa ngokusika okokusebenza esikhundleni sokwengeza okokusebenza ukwenza umkhiqizo.
Imishini ye-CNC ingachazwa njengenqubo yokukhiqiza eyenziwe ngamarobhothi. Inqubo yenze ukuthi kwandiswe umkhiqizo ngoba umshini ungazigijimela ngaphandle kwesidingo se-opharetha sokubakhona njalo.
Uyini Umlando we-CNC Machining?
Owandulelayo we-CNC ukulawula izinombolo (i-NC), inqubokuchazwe yiNhlangano Yonjiniyela Bezokukhiqizanjengoku “phawula ukuqala kwenguquko yesibili yezimboni kanye nokufika kwenkathi lapho ukuphathwa kwemishini nezinqubo zezimboni kuzodlula kusuka kohlaka olungacacile kuya kwesayensi ngqo.”
Imishini ye-CNC yaqala njengobuchwepheshe obushaywe ngeteyipu obususelwe ku-1940 kanye nawo-1950ngaphambi kokuvela ngokushesha kubuchwepheshe be-analog nobedijithali ngawo-1960.
UJohn T. Parsonskubhekwa njengoyise we-CNC machining. Uthuthukise ukulawulwa kwezinombolo, okuyisimiso sokuthi ukwakhiwa kwe-CNC kwakhiwe phezu kwaso. Kepha nangaphambi kwamaParsons, i-inqubo yokusungula imishini yayisunguliwengo-1751. Kwathi ngo-1952, uRichard Kegg, ngokubambisana neMassachusetts Institute of Technology (MIT), wenza umshini wokuqala wokugaya we-CNC.
Yimiphi imiqondo eyisisekelo ye-CNC Machining?
Ukuqonda ukuthi i-CNC isebenza kanjani, sidinga ukuqonda eminye imiqondo eyisisekelo.
Lokhu kusho ukulawula okuzenzakalelayo kwamathuluzi omshini. La mathuluzi omshini asukela ku-ukugayakuma-welders, amagiya, abagawuli be-waterjet, kanyeumshini wokubacindezela we-hydraulic.
Ubuso bekhompyutha be-CNC Machining
Lezi yizinhlobo ze-CNCs ezincane futhi zenzelwe kangcono ukusebenza ezintweni ezithambile njenge-wax, igwebu, namapulasitiki. Lolu hlobo lwemishini lusebenzisa izinguqulo ezincane zemishini ye-CNC ukwenza imikhiqizo emincane, ikakhulukazi ngabantu abazilibazisa.
I-Computer-Aided Machining noma i-Manufacturing (CAM) isebenzisa isoftware ukwenza ikhodi yokusebenzisa imishini ye-CNC. Ukuze usebenze ngohlelo lwe-CAM, udinga izinto ezintathu:
Eyokuqala isoftware eyalela umshini maqondana nezikhombisi okumele zihambe.
Udinga nomshini okwazi ukuthatha imiyalo.
Ekugcineni, udinga ukuba namandla okwenza okuthunyelwe ngemuva ukuze uguqule imiyalo ibe ngolimi imishini engaluqonda.
Lolu wulimi lwekhompiyutha oluyisisekelo, kepha olwehlukile olwenzelwe umshini we-CNC ukuqonda ngokushesha nokwenza ikhodi ye-NC (evame ukubizwa nge-G-code). Lolu wulimi olusetshenziswa wuhlelo ukutshela umshini ukuthi wenziwa kanjani okuthile.
I-postprocessor ngumhumushi oguqula i-G-Code ibhalelwe umshini owodwa we-CNC ibe yikhodi engaqondakala futhi yenziwe ngomunye umshini we-CNC.
Ngabe i-CNC Machining isebenza kanjani?
Imishini ye-CNC isebenza ngokwenza ukuthi imiyalo yayo ifakwe ku-software ifakwe kumakhompyutha kusetshenziswa ikhibhodi encane exhunywe emshinini. Uhlelo lwe-CNC bese lwenza le misebenzi ehleliwe ngendlela efanayo namarobhothi.
Yiziphi Izinhlobo Ezihlukile Zemishini Ye-CNC?
Imishini ehlukene ye-CNC isebenza ngezinhloso ezahlukahlukene. Ezinye zezinhlobo ezivame kakhulu zemishini ye-CNC yizigayo, ama-lathes, ama-routers, ama-plasma cutters, kanye ne-LaserJet cutters. Ungabona izibonelo eziningi zezinhlobo ezahlukahlukene zemishini ye-CNC nokuthi zenzanilapha.
Yini engenziwa yi-CNC Machines?
Imishini ye-CNC ingaveza imikhiqizo ehlukahlukene kusuka kuzinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi izinsimbi, amapulasitiki, igwebu nezinkuni. Uma nje into inganqunywa, ingasetshenziselwa ukwenza imikhiqizo emshinini we-CNC. CNCizihlakala zensimbiingasetshenziswa machining izinduku nxazonke, imicu kanye nemibuthano yangaphandle. Imishini yokugaya i-CNC ingasetshenziselwa ukucubungula izindawo, okhiye, nezinye izinhlobo ezingajwayelekile. Umshini wokubhola ungabhoboza izimbobo:lapha.
Isoftware ye-CNC ngamaphakeji ezicelo abhala i-G-Code engafundwa umshini we-CNC. Le software ibizwa ngokuthiUkukhiqizwa Kwekhompyutha (CAM)nomaIdizayini Esizwa Ngekhompyutha (CAD). Le software ibhekele ukulawulwa kwezinombolo kwemishini ye-CNC. Kuyasiza ukwakha imiklamo uhlelo lwekhompyutha kumshini we-CNC engayihumusha.
Izinhlobo ezahlukene zesoftware ye-CNC zinokusetshenziswa okuthile:
Umdwebo Osizwa Ngekhompyutha (CAD):Lokhu kusetshenziselwa ukudala ukwakheka kwe-2D ne-3D kanye nemibhalo yezobuchwepheshe.
Ukukhiqizwa Kwekhompyutha (CAM):Ivumela abasebenzisi ukusetha umsebenzi emagatsheni ukubhekela imisebenzi eminingi njengokuhamba komsebenzi, izindlela zamathuluzi, kanye nokusika kokulinganisa.
Ubunjiniyela Obusizwa Ngekhompyutha (CAE):Ngabe izinhlelo zisetshenziswa kuyo yonke inqubo yentuthuko ngesikhathi sokucutshungulwa kwangaphambili, ukuhlaziywa, nangemva kokucutshungulwa.
Yiziphi izinzuzo nezinkinga ze-CNC Machining?
Njenganoma yibuphi nje obunye ubuchwepheshe, i-CNC machining iza nobuhle nobubi bayo. Sibheka ezinye zazo ngezansi.
Imishini ye-CNC ibamba inzuzo enkulu ngaphezu kokukhiqizwa kwendabuko ngoba yehlisa izindleko zabasebenzi. Iyanciphisa kakhulu umkhawulo wephutha ekukhiqizeni. Ngaphezu kwalokho, kwenza ukukhiqizwa kwesisindo kube umsebenzi olula kakhulu kunakuqala ngenxa yekhono laso lokuletha imiphumela efanayo ngokungaguquguquki.
I-CNC ibuye inikeze ukuguquguquka kokuklama okuvumela isoftware ukuthi yenziwe kabusha kabusha ngokushesha ukudala izingxenye ezintsha ngokuphelele noma ukulungisa amaphutha.
Okubi kwe-CNC Machining
Okubi emshinini we-CNC yimali yokuqala yokusetha. Izinkampani zingadinga ngisho nokuthatha imali mboleko ukuthola ubuchwepheshe be-CNC. Kepha, uma inkampani ingakhuphula inzuzo ngokusebenzisa imishini ye-CNC, lolo lwazi lungabuyiselwa ngokushesha.
Imishini ye-CNC ihlala ekucabangeni kokungaphumeleli kwamakhompyutha. Lokhu kusho ukuthi abanye abantu abasebenzisa i-CNC machining systems bangabheka ukuthi kungenzeka kube namaphutha, okwenza kube lula ngamaphutha ukuthi angene ngokunganakwa. Kodwa-ke, ngokuqeqeshwa okufanele, lokhu kungancishiswa.
Okokugcina, ngoba kuyinqubo yokukhipha, imishini ye-CNC idala imfucuza, engaba nemiphumela emibi emvelweni. Noma kunjalo, izinqubo zokuphathwa kwemfucuza zingafakwa ukuze kuqinisekiswe ukuthi imfucuza ekhiqizwa ngokukhiqizwa kwemishini ye-CNC ingabuye isetshenziswe kabusha.
Isebenza Kanjani i-CNC Machining Ekukhiqizeni Kwamanje?
I-CNC machining ifake uhlobo olusha lokukhiqiza kwesimanje ngeminikelo yalo yokusebenza kahle nokunemba okukhulu, ngaleyo ndlela ihlinzeka ngokuthuthuka okukhulu ngezindlela ezijwayelekile zokukhiqiza zanamuhla. Lokhu kusho ukuthi izinkampani ezisebenzisa i-CNC machining zonga izindleko ngokwemisebenzi nesikhathi, zikhulisa inzuzo ngokuhamba kwesikhathi.
I-CNC ibuye yenze izinqubo ezinjengokuzenzela (amashidi wokushisela wensimbi, ukugunda, izimbobo zokubhoboza, nokusika ilangabi) okuphephile. Kuyindlela enhle yokuqamba amanga ngoba imishini iyaguquguquka futhi ingahlelwa kabusha.
Ingabe i-CNC Ingcono Kunokuphrinta Kwe-3D?
Ukuphrinta kwe-3D ne-CNC machining zombili izindlela zokukhiqiza. Umehluko obucayi phakathi kwabo ukuthi i-CNC machining iyinqubo yokukhipha, kuyilapho ukuphrinta kwe-3D kuyindlela yokwengeza. Lokhu kusho ukuthi owokuqala udala imikhiqizo ngokuqhekeza izinto ezisuka kucezu lwangempela, ngenkathi eyokugcina idala umkhiqizo ngokungeza okokusebenza.
Yikuphi okungcono phakathi kwalezi zindlela ezimbili? Kuya ngezinto eziningi, njengezinto ezisetshenziswayo, ubunzima bezingxenye, amakhono abasebenzi, okwenziwayo, kanye nokucatshangelwa kwezezimali. Ngakho-ke, enye indlela ingaba yinhle emsebenzini othile hhayi enye.
Abasebenza ngomshini be-CNC badinga izinga elithile lokuqeqeshwa nemfundo ukungena kulo mkhakha.
Yimaphi Amakhono Owadingayo ukuze ube yi-CNC Machinist?
Abasebenza ngemishini be-CNCidinga ubuncane bediploma yesikole esiphakemenoma i-General Educational Development (GED) ngaphambi kokuthi baqhubeke nokuthola amakhono aqondene ne-CNC ezikoleni zobuchwepheshe. I-GED iqoqo lezivivinyo ezisetshenziselwa ukuthola ukuthi ngabe umuntu e-United States noma eCanada unamakhono okufunda asezingeni eliphakeme.
Abachwepheshe be-CNC, abanesitifiketi esivela ezikhungweni ezifana ne-Isikhungo Sikazwelonke Samakhono Okusebenza Ngezinsimbi(NIMS), ube nenzuzo ngaphezu kwalabo abangenaso isitifiketi.
Ngingakutholaphi ukuqeqeshwa ukuze ngibe yi-CNC Machinist?
Abantu ababhala izinhlelo ezilandelwa yimishini ye-CNC baziwa njengeAbahleli be-CNC, kuyilapho labo ababa khona ekusebenzeni kwemishini phansi esitolo baziwa njengeOpharetha be-CNC.
Uma ufuna ukuba wuhlelo lwe-CNC, ujwayele ukuchitha isikhathi esiningi njengomfundi noma esikhungweni semfundo ephakeme esisemthethweni. Opharetha be-CNC bavame ukuqeda izifundo zesikhashana, futhi bathole ulwazi oluningi emsebenzini.
Izikole eziningi ziyanikelaUkuqeqeshwa okuqondene ne-CNC. Phakathi kwazo kukhonaIGoodwin University, isikhungo esizichaza ngokuthi "isikole se-CNC opharetha" "esenzelwe ukuthi abafundi baqinisekiswe futhi basebenze emkhakheni ngesikhathi esifushane, esimisweni esiguquguqukayo."
Ingabe i-CNC Machining ilungele iphrojekthi yami?
Imishini ye-CNC isebenziseka ngezindlela eziningi, futhi ukusetshenziswa kwayo kuhlanganisa izimboni eziningi, kufaka phakathi i-aerospace, ezolimo, ukwakhiwa, ukuphrinta, ukukhiqiza, ezempi kanye nezokuthutha. Ngakho-ke, uma iphrojekthi yakho idinga inani elikhulu lokungaguquguquki, ukunemba nokusebenza kahle, i-CNC ingukukhetha kwakho okuhle kakhulu.
Liyini Ikusasa le-CNC Machining?
Njengoba ubuchwepheshe bufanaukuhlakanipha okungekhona okwangempelafuthiukufunda ngomshiniithandwa kakhulu, kulindeleke nokuthi ukuthandwa kwemishini ye-CNC kukhuphuke. Noma abanye bengakhathazeka ukuthi le mishini esezingeni eliphezulu izothatha imisebenzi kubantu, lokhu akuvamile ukwenzeka lapho ubuchwepheshe buthuthuka, ngoba kudala imisebenzi eminingi ezindaweni ezintsha.
Ukwanda ekusetshenzisweni kwemishini ye-CNC kuzoba nezinzuzo kubo bobabili abasebenzi nabakhiqizi. Okwakuqala, izinqubo azinzima kangako, nokuphepha kuyathuthukiswa. Okwamuva, inzuzo izokwenyuka ngenxa yokusebenza kahle. Ngakolunye uhlangothi, amakhasimende azohlomula ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme.